नेपालको स्वीजरल्यान्ड | मझेरी डट कम
editor — Sat, 11/15/2014 - 20:33
ताजापर्नको लागि कतै घुम्न जाने मन थियो । काठमाण्डौको उकुस मकुस वातावरण्भन्दा फरक हावा पानी भएको ठाउतिर । केही नया अनभूति प्राप्तहोस भनिकन, केही मन मिल्ने साथीहरू मिलेर जाउँ । अन्त त चारजना मन मिल्नेहरू जम्मा भयौ - तेज राई, आनन्द डङगोल, चन्द्र वाङँदेल, र म लामाखले ।
त्यो कून ठाउँहोला जहाँबाट नियाल्दा ज्युरीच को सम्झना होस ? "जिरी"लाई नेपालको स्वीजरल्याण्ड भन्ने गरिदोरहेछ । हाम्रो भ्रमणटोलीमा पनि यो प्रसंग उठयो ।विसेष् त्यो डाँडो पहिल्याउने जिम्मा तेजलाई दिएका थियौँ ।
जाँउ मामा एकछिन घुमेर आँउ ! आनन्दले भन्यो— हुन्छ ! मैले स्वीकृति दिए, हामी दुई जना घुम फिर, मोर्निङवाक को रुपमा बाहिर निस्क्यौं । अलिपर बजारको छेउमा जंगलकोमुनि बौद्दमार्गिहरूको आस्थाको प्रतिक्र गुम्बा रहेछ त्यहा धुप बाल्यौ । लगत्तै चन्द्र भान्झा पनि त्यही आईपुगे पालै पालो फोटो खिच्यौं । त्यसपछि उधो ओरालो लाग्यौं, सानो स्वास्थ्य केन्द्र (अस्पताल) निर्माणाधिन साइनबोर्ड हेर्दा थाह भयो । त्यसभन्दा तल गाई पालन गोठ देखिन्थ्यो, तर त्यहा गाई थियाृ वा थिएन यकिन भएन, अनुमान गर्दा थिएन । अँझ तलतिर नियाल्दा सानो फाट, वारि पारि जंगल समग्रमाभन्दा "जीरी" निक्कै राम्रो ठाउँ भन्न पर्छ ।
हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम नै थियो काठमाण्डौबाट हिड्दैखेरी, कि फर्कदा भिमेस्वर माहादेवको दर्शन गर्ने, जस्को महिमा बेला बखत अनौठो लाग्ने ढंग्को सूुनिने गर्दछ । "केही अनिस्ट हुनेभयो वा मुलुकमै केही अप्रिय घटना हुने भयो भने त्याहाँको भगवती को मूर्तिमा पसिना आउछ रे ! त्यसो भएकोले सो मन्दिर देवस्थलको दर्शन गर्ने, हेर्ने र आफ्नै निजि धारणा बनाउने उत्कट इच्छा पनि थियो ममा र अरु सहयात्रीमा पनि सोही मनसाय रहेछ ।
यसतै यसतै प्रशंगका गफ गफिंदै निक्कै लेखतिर पुग्यौं ? मैना पोखरा झर्ने बिन्दुमापुगेर ओरालो लाग्यौं, ओरालो झर्दा झर्दै सानो वस्ति"बजार आईपुग्यो "मैना सुनुवारलाई, बलात्कार पछि सेनालेगोली हानेर हत्या गरेको चर्चित ठाउँ, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म चर्चित ठाउँमै चर्चा गर्दै ओरालो बाटोमा ठाउ ठाउँमा काठ चिर्ने कार्खानाहरू भेटिन्थे बाटा भरी बिभिन्न जातका रुखका गिडहरू चट्टा लगाएर राखेको, यसो वारि पारि गाउ बस्तीतिर नियाल्दा कपाल झरेको रोगी जस्तो देखिने पाखोहरू, कही कतै बृक्ष रोपन गरेको, स्याहार गरिएको जङ्गल देखिएन । यही मेसोमा मलाई थाईल्याण्ड, मलेशिया, जापान, चिनतिर बरालिदाको सम्झना आयो बन जंगल गोड मेल गरेको, बृक्षा रोपन गरेको, ब्यापक ठुल ठुला बन नर्सरिहरू स्थापना गरेका दसौं माईल जंगलमै गाडिमा दगुर्दाको याद आयो ।
"हाम्रोमा समय परिवर्तन भो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भो, पात्रहरूपनि परिवर्तन भए, तर सोंच र पुराना ढर्राहरू परिवर्तन हुन सकेको छैन । जस्कारण् हामी संसारको अति गरिब, पछौटे, दरिद्र मध्यमा दरिएका छौं" ।यदि राज्यले यस्का प्रमुख संयन्त्रहरले इच्छा शक्ति देखाएर ढाचा ढर्रा बदलेर अगाडी बढ्ने हो भने ९ किलो मीटरभित्र नौ ठाउमा बाँद बाधेर बिजुली उत्पादन गर्ने देशहरू पनि छन ।
पूजा आरधना सकेर मन्दिरबाट फर्केर फेरि उकालो लाग्यौं चरिकोट बजार अबलोकन गर्दै, १०.३० बजिसकेको रहेछ । गाडी जाममा फस्यो बाटो सानो भएको कारण एकछिन तनाव भो, भोक पनि लागिसकेको थियो । रेस्टुरेन्ट खोज्दै खाज्दै जाँदा ठुलठुलो अक्षरमा लेखिएको "थकाली भान्साघर" भेटियो । सुनेका थियौं थकाली खाना खुव मिठोहुन्छ ! तर त्यो रेस्टुरेन्ट त थकाली को न भएर अरुनै जातको पो रहेछ नाम मात्र थकालीको राखिएको रहेछ ।
नाम थकालीको तपाई त .................अर्कै ...?
जिरी जाउँ जाउँ लाग्यो ।
gorkhe — Sun, 11/16/2014 - 00:23